ဘုန်းကံမြင့်သော မိန်းမများ အမျိုးသမီးများအတွက် ခွန်အားဖြစ်စေသောပိုစ့်လေးတစ်ပုဒ်အစွန့်ပစ်ခံ မိန်းမသားတို့၏ ဘုန်းကံဆိုတာ ယောကျ်ား ဖြစ်သူကထားခဲ့လို့ဖြစ်စေ ချစ်သူကထားခဲ့လို့ဖြစ်စေ အငယ်အနှောင်းယူသွားလို့ဖြစ်စေ ….အပြစ်ရှာ ထွက်ခွာလို့ဖြစ်စေစွန့်ပစ်ခဲ့ရင် မိန်းမ တချို့ဘဝ ပျက်မတတ်ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်….အမှန်က ပျော်ရမှာပါလက်ခုပ်တီးပြီးကို ကျေနပ် ဝမ်းမြောက်စွာပျော်နေရမှာပါ…. ကိုယ်ငယ်ရွယ်ကျန်းမာတုန်း သန်စွမ်းနေတုန်း ရှာဖွေနိုင်တုန်းမှာ သိလိုက်ရတဲ့ အတွက် ကိုယ့် တန်ဖိုး နားမလည်တဲ့လူရဲ့ ဘေးနားမှာနေပြီး ….
အဓိပ္ပါယ်မဲ့ ဖြတ်သန်းရ ခြင်းထက် နှောင့်ဖွဲ့ခြင်းမဲ့စွာ ဘဝ ကိုလွတ်လပ်စွာ တည်ဆောက်ရခြင်းက ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကို နားလည်ခဲ့ရင် ဒီမိန်းမဟာ ပျော်သင့်ပါတယ်…တခါက ဘုရင်ကြီး တစ်ပါးမှာ သမီး(၃)ယောက် ရှိသတဲ့….ဘုရင်ကြီးက သမီးတော် တို့ ဒီလိုနေနေရတာ ဘာကြောင့်လဲလို့ မေးတဲ့အခါ ….သမီးအကြီး (၂)ယောက်က”ခမည်းတော် ကျေးဇူးကြောင့်…. ”လို့ အမြဲလျှောက်ပြီး အငယ်ဆုံး သမီးတော် ကတော့”သမီးတော် ရဲ့ဘုန်းကံ ကြောင့်” လို့လျှောက်သတဲ့။တိုတိုပြောရရင် ဘုရင်ကြီး ကစိတ်ဆိုးပြီး အဆင်းရဲဆုံးလူနဲ့ပေးစားလွှတ်လိုက်တယ်။တောစပ်မှာ ထင်းခုတ် ဖို့သွားတော့ ချောင်းတစ်ခု အကူးမှာ ….
သူဆင်းရဲ ထင်းခုတ် သမားဟာ စိန်တွေတွေ့တော့ သူ့မိန်းမ အတွက်ဆော့ကစား ရအောင်ယူလာရာက
မင်းသမီးက နေရာလိုက်ပြခိုင်းပြီး … ခမည်းတော်ထံအပ်တော့ ….ခမည်းတော့်ဘဏ္ဍာဆိုရင် မီးသွေးတုန်းပဲဖြစ်နေလို့
သမီးတော့်ဥစ္စာဆိုမှ စိန်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ကဲ…ဒီတော့ ပြောချင်တာက မိန်းမ တိုင်းမှာ သူ့ဘုန်းသူကံဆိုတာရှိတယ်… ယောက်ကျာ
း တစ်ယောက်ဘုန်းကံနိမ့်လာပြီဆိုရင် မိန်းမ တစ်ယောက်ရဲ့ ဘုန်းကံရှိမြဲရှိနေတယ်ဆိုရင်….
အကြောင်းအမျိုးမျိုးပေါ်လာပြီး အဲ့ဒီ ယောက်ကျားဟာ ဘုန်းကံရှိတဲ့ မိန်းမနားမှာ မနေနိုင်ပဲ စွန့်ပြေးချင်စိတ် ပေါက်လာလိမ့်မယ်…. ဘဝမှာ ဒီ မိန်းမ ကြောင့်သာ ဒီလိုနေထိုင် ဒီလိုစားသောက်ရပြီး ဒီလိုစည်းစိမ်နဲ့ အဆင်တပြေ နေရမယ့်ကံပါလာတယ်ဆိုတာ … သူတို့မသိကြဘဲ …..သူတို့တော်လို့ တတ်လွန်လွန်းလို့ချည်း ထင်တတ်ကြတယ်….အားပေးချင်တာက သတ္တိရှိကြပါ…ရဲရဲသာလုပ်ပြပါ…မတွန့်ပါနဲ့…မကြောက်ပါနဲ့…ဝမ်းမနည်းပါနဲ့… ကွဲကြည့်လိုက် ခွဲနေကြည့်လိုက်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ တိတ်တိတ်လေးအချိန်တခုသာပေး စောင့်ကြည့် နေလိုက်ပါ…။
လူတိုင်းလက်ခံနိုင်တဲ့ ကိုယ်လည်းကျေနပ်ဝမ်းသာရမယ့် အဖြေတစ်ခု ရမှာပါ…။သိဉ္စည်းမင်းကြီး တောလိုက်ရာမှအပြန် သစ်ပင်ပေါ်တွင် ကောင်းခြင်းငါးဖြာ နှင့်ပြည့်စုံသော မိန်းမပျိုတစ်ဦးကို တွေ့သည်နှင့် မေးမြန်းရာ …ဖခင်ကပေးစားသည့် ယောကျ်ားကိုယူ၍ လိုက်ခဲ့စဉ် တောလမ်းတစ်နေရာ၌ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက သဖန်းသီးများခူးစားနေရာ ….
မိမိကဆာလှသဖြင့် တောင်းစားသော် စားလိုလျှင်ကိုယ်တိုင် ခူးစားဟု ဆိုလေသည်။
သို့နှင့် ကိုယ်တိုင်တက်ခူးရာ ပြန်မဆင်းနိုင်အောင် သစ်ပင်အောက်ခြေတွင်ဆူးများဖြင့်ကာရံ၍ ထွက်ပြေးတော့သည်ဟူ၏။
မင်းကြီးလည်း ကောင်းခြင်းငါးဖြာနှင့် လှပတင့်တယ်သော် ထို မိန်းမပျို ကို မိဖုရားခေါင် အဖြစ် တင်မြှောက်ခဲ့လေသည်။
ထို့နောက် မင်းကြီးနှင့် မိဖုရားကြီးတို့ တိုင်းခန်းလှည့်လည်ရင်း တစ်နေရာ အရောက်တွင် မိဖုရားကြီး က
ဣန္ဒြေမဆည်နိုင်ဘဲ ခစ်ခနဲ ရယ်တော်မူသည်ကို မင်းကြီး မေးလျှင် ဤသို့ဖြေဧ။်။
ဘုရားနှမကို တောတွင်း၌ ပစ်ပြေးသွားသူသည် ယခုအခါ လမ်းခင်းနေရသည်ကို တွေ့လျှင်
ဘုရားနှမကဲ့သို့ ဘုန်းကျက်သရေရှိသူကို ဤလူညံ့မဆောင်နိုင်ရှာ ဟုတွေးမိ၍ ရယ်မိကြောင်းပါ ဘုရား
မင်းကြီး က မယုံကြည်၍ ဘုရားလောင်း မဟော်သဓသုခမိန်ကို မေးရာ ဘုရားလောင်းက ဤသို့ရှင်းဧ။်။
ဤ မိန်းမမြတ် ကို ယောကျ်ား က စွန့်ပစ်သွားသည်ဟူသော စကား ကို သားတော်ယုံ ကြည်ပါသည်။
ထို့နည်းတူစွာ ဘုန်းကံမြင့်မားသော မိန်းမကောင်းတွေကို ညံ့ဖျင်းသိမ်နုပ်သော ယောက်ျားယုတ်က တန်ဖိုးကို နားမလည် သောကြောင့် ….
စိတ်၏ဆင်းရဲခြင်း ကိုယ်၏ဆင်းရဲခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေလျက် မိန်းကလေး ဘက်က စွန့်ခွာသွားအောင်လည်းကောင်း ….
မိမိကိုယ်တိုင် စွန့်ပစ်၍သော်လည်းကောင်း သူတို့၏ ဘုန်းကံ နိမ့်ပါးမှု့ အတိုင်း ဘဝကို ရွေးခြယ်ကြရ၏။
သို့ဖြစ်ရာ အမျိုးသမီးတို့သည် မိမိ တို့၏ တန်ဖိုး ကို ကောင်းစွာသိရှိနားလည်ပြီး တန်ဖိုးထားတတ်သူနှင့်သာလျှင် ကောင်းစွာ ထိုက်တန်ပါပေ၏။
တကယ်တော့ မိမိကို စွန်ပ့စ်သွားသူသည် မိမိ ၏ ဘုန်းကံ အရှိန်ကို မလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ ခပ်ညံ့ညံ့လူသာ ဖြစ်တဲ့အတွက်
သာလွန်မြင့်မြတ်သူနှင့် ဆုံဆည်းရမည့် မိမိကံကိုသာ တွေးတောဝမ်းသာသင့်တော့သည် မဟုတ်ပါလား….
ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုစွန့်ခွာသွားလို့ ဝမ်းနည်းပက်လက် မျက်ရည်တစက်စက်နဲ့ ဘဝသေလို ကျန်ခဲ့တဲ့
ဘဝကို လက်တွေ့ကျကျအကောင်အထည်ဖော်ပါ…..! သူများအားမကိုးပါနဲ့…..
တစ်နေ့ ကိုယ့် ဘုန်း ကိုယ့်ကံနဲ့တန်တဲ့လူနဲ့ကြုံလာခဲ့ရင် ကိုယ့်အခြေအနေတင့်တယ်လှပနေရမယ်လို့ ခံယူထားပါ….
လှပမှုရှိနေပါက မောင်ကြီးမခွာနိုင် ဖြစ်နေမှာ အသေအချာပါ…..။